Ny Bokin’ i Etera
Ny rakitsoratry ny Jarèdita, nalaina avy tamin’ ny takelaka efatra amby roapolo hitan’ ny vahoakan’ i Limia tamin’ ny andron’ i Môsià mpanjaka.
Namintina ny soratr’ i Etera i Môrônia—Aroso etoana ny tetiaran’ i Etera—Tsy voakorokoro ny fitenin’ ny Jarèdita tao amin’ ny Tilikambon’ i Babela—Nampanantena ny hitarika azy any amin’ ny tany nofinidy ny Tompo ary ny hahatonga azy ho firenena lehibe.
Niomana ho amin’ ny diany mankamin’ ny tany nampanantenaina ny Jarèdita—Tany finidy izany izay tsy maintsy anompoan’ ny olona an’ i Kristy na ho fongana—Niresaka tamin’ ny rahalahin’ i Jarèda mandritra ny ora telo ny Tompo—Nanamboatra sambo ny Jarèdita—Nangataka ny rahalahin’ i Jarèda ny Tompo hamosa-kevitra ny amin’ ny fomba hanazavana ny sambo.
Nahita ny rantsan-tanan’ ny Tompo nikasika ny vato enina ambin’ ny folo ny rahalahin’ i Jarèda—Naneho ny vatany fanahy tamin’ ny rahalahin’ i Jarèda i Kristy—Ireo izay manana fahalalana tomombana dia tsy ho azo tanana any ivelan’ ny voaly—Nampombana ny fandikan-teny hitondrana ny rakitsoratry ny Jarèdita ho eo amin’ ny mazava.
Nodidina i Môrônia hifehy ny soratry ny rahalahin’ i Jarèda—Tsy hambara ireny raha tsy manana finoana tahaka ny rahalahin’ i Jarèda ny olona—Nandidy ny olona i Kristy hino ny teniny sy ny an’ ireo mpianany—Nodidina ny olona hibebaka, hino ny filazantsara, ary ho voavonjy.
Vavolombelona telo sy ny asa mihitsy no hijoro ho toy ny fanambarana ny amin’ ny fahamarinan’ ny Bokin’ i Môrmôna.
Natosiky ny rivotra nankamin’ ny tany nampanantenaina ny sambofiara Jarèdita—Nidera ny Tompo ny vahoaka noho ny hatsarany—Notendrena ho mpanjaka teo aminy i Ôrihà—Maty i Jarèda sy ny rahalahiny.
Nanjaka tamim-pahamarinana i Ôrihà—Tao anatin’ ny fisandohana sy ny adilahy no nitsangana ny fanjakam-pifandrafian’ i Solè sy i Kôhôra—Ny mpaminany dia nanameloka ny faharatsiana sy ny fanompoan-tsampin’ ny vahoaka izay nibebaka taorian’ izany.
Nisy ny adilahy sy ny fifandirana momba ny fanjakana—Nanangana tsikombakomba miafina nofehezim-belirano i Akisa hamonoana ny mpanjaka—Avy tamin’ ny devoly ny tsikombakomba miafina ary niafara tamin’ ny faharavan’ ny firenena—Ny Jentilisa ankehitriny dia nampitandremana tamin’ ny tsikombakomba miafina izay nikatsaka ny handrodana ny fahafahan’ ny tany, ny firenena ary ny fanjakana rehetra.
Avy tamin’ ny anankiray dia nifindra tamin’ ny anankiray hafa ny fanjakana tamin’ ny alalan’ ny firazanana, ny fiokoana ary ny vonoan’ olona—Nahita ny Zanaky ny Fahamarinana i Emera—Niantso fibebahana ny mpaminany maro—Nampahory ny vahoaka ny mosary sy ny menarana misy poizina.
Nifandimby ny mpanjaka—Ny sasany tamin’ ny mpanjaka dia marina; ny hafa dia ratsy—Rehefa manjaka ny fahamarinana, dia tahina sy tsimbinin’ ny Tompo ny vahoaka.
Nanjaka teo amin’ ny fiainan’ ny Jarèdita ny ady, ny fifandirana ary ny faharatsiana—Nilaza mialoha ny famongorana tanteraka ny Jarèdita ireo mpaminany raha tsy mibebaka izy—Nitsipaka ny tenin’ ny mpaminany ny vahoaka.
Nitaona ny vahoaka hino an’ Andriamanitra i Etera mpaminany—Nitantara ny mahagaga sy ny mahatalanjona vitan’ ny finoana i Môrônia—Finoana no nahafahan’ ny rahalahin’ i Jarèda nahita an’ i Kristy—Nanome fahalemena ny olona ny Tompo mba hahatonga azy hanetry tena—Namindra ny tendrombohitr’ i Zerina tamin’ ny finoana ny rahalahin’ i Jarèda—Ny finoana, ny fanantenana ary ny fiantrana dia ilaina amin’ ny famonjena—Nahita an’ i Jesoa nifanatrika taminy i Môrônia.
Niresaka ny amin’ i Jerosalema Vaovao izay haorin’ ny taranak’ i Josefa any Amerika i Etera—Naminany izy, voaroaka, nanoratra ny tantaran’ ny Jarèdita ary nilaza mialoha ny famongorana ny Jarèdita—Nirongatra ny ady eran’ ny tany manontolo.
Nitondra ozona teo amin’ ny tany ny heloky ny vahoaka—Rafitra niady tamin’ i Gileada, tamin’ i Liba avy eo, ary rehefa izany dia tamin’ i Siza i Kôriantomira—Nandrakotra ny tany ny ra sy ny fandringanana.
An-tapitrisany ny Jarèdita voavono an’ ady—Namory ny olony rehetra ho amin’ ny ady mahafaty i Siza sy i Kôriantomira—Nitsahatra ny fitaoman’ ny Fanahin’ ny Tompo azy ireo—Fongotra tanteraka ny firenena Jarèdita. I Kôriantomira ihany no tafajanona.